OKUSHA! Co-living Space /Free Brkf/eduze ne-MY KHE beach
Ikamelo e-iyunithi yokuqasha ibungazwe ngu-Bare
UZOKHATHAZEKA NGOKUBEKELELA AMAHOTELA?
Kunamahhotela namahostela ndawana thize ahlanganiswe nezakhiwo zamahhovisi, futhi igumbi lakho alikho kuwo.Asikhohlwe ngehhotela. Kungakhathaliseki ukuthi ufuna indawo yeholide lakho noma uhlala lapha ezinsukwini ezimbalwa, ikhaya lakho lidinga ukuba nokunethezeka okwanele, umehluko, nobumfihlo. Kulapho olala khona uphephile futhi uphilile, bese uvuka libalele.
Lesi situdiyo singesinye samayunithi angu-3 atholakala esitezi sesi-3 sendlu yaseNắng enombhede olingana nendlovukazi, ikhishi kanye negumbi lokugezela le-en-suite.
✯ Ingqikithi yendawo yangasese ngaphakathi kwefulethi ilinganiselwa ku-25m2
✯ Kudingeka ukwazi ukuhamba ukhuphuke okungenani izitebhisi esisodwa
✯ Ukudla kwasekuseni kufakiwe
✯ Umshini wokuwasha
NGAPHAKATHI NOMA NGAPHANDLE, IYIPHI OKUTHANDAYO? Kungakhathaliseki ukuthi yisiphi isitayela sakho, igumbi limayelana nawe. Vula amafasitela kuvulandi ukuze uzwe amazwi ajwayelekile abalingani basekhaya. Noma vala umnyango ukuze ubuyise indawo yakho engcwele ecashile. Igumbi lifanelana nesitayela sakho. Ukuhlala endlini noma ngaphandle, njengoba nje uthanda.
✯ imizuzu emi-3 ukuya e-Dragon Bridge kanye nolwandle lwase-My Khe ngamabhayisikili
✯ Imizuzu emi-5 ukuya ezindaweni ezikhangayo ezifana ne-Han Market, isonto le-Con Ga kanye nezindawo zokudlela ezihamba ngezithuthuthu
✯ Imizuzu engama-20 ukuya e-Linh Ung pagoda nase-Ban Co, izindawo ezikhangayo okufanele uvakashele e-Da Nang
✯ Imizuzu engama-40 ukuya eHoi An ngezithuthuthu
Sikulungisele nezincwadi zomhlahlandlela wokuvakasha.
Izivakashi zinokufinyelela okungu-24/7 esakhiweni, okuhlanganisa: indawo evamile yokuxoxa noma yokusebenza, ikhishi elihlanganyelwe ukuze wenze ukudla okuphekwe ekhaya uwedwa.
Wamukelekile ukucela usokhaya wethu ukuthi asize. Sisuke siwumlayezo nje.
Izivakashi zinokufinyelela okungu-24/7 esakhiweni, okuhlanganisa: indawo evamile yokuxoxa noma yokusebenza, ikhishi elihlanganyelwe ukuze wenze ukudla okuphekwe ekhaya uwedwa…
UBare Ungumbungazi ovelele